Gudoomiyaha xisbiga Awooda Shacabka oo sheegay in Soomaaliya aysan xamili karin wakhti lumin siyaasaddeed – Kalfadhi
Gudoomiyaha xisbiga Awooda Shacabka oo sheegay in Soomaaliya aysan xamili karin wakhti lumin siyaasaddeed
September 12, 2020 Hassan Istiila
Guddoomiyaha xisbiga Awooda Shacabka Mudane Thabit Abdi Mohamed ayaa sheegay in shirka Mogadishu uu noqdo midkii gunnaanadi lahaa geedi socodkii shirrarka, doodihii arrimaha doorashooyinka iyo khilaafkii soo jiray.
Mudane Thabit, duqii hore ee Magaalada Mogadishu, ayaa boggaadiyay in dhammaan dhinacyadu aqbaleen iney Muqdisho isugu yimaadaan, waxaa kale oo uu ku boggaadiyay in danta guud loo tanaasulo oo aan waqti kale laga lumin shacabka Soomaaliyeed ee indhaha iyo dhaggaha ku haya shanqarta siyaasiyiinta.
“Marka la eego halka ay maanta Soomaaliya joogto, ma xamili karto waqti lumin siyaasaddeed, jahwareer doorasho iyo xifaaltan kooxeed. Ummaddeena intaas waa ka baahi badan tahay, waana ka maamuus weyn tahay”
“Shirka Muqdisho waa inuu noqdaa midkii gunnaanadi lahaa geedi socodkii shirrarka, doodihii arrimaha doorashooyinka iyo khilaafkii soo jiray, waana inuu xaaladda taagan si waadix ah u go’aamiyaa. Waxa qura ee la qaadan karo waa inuu shirkan kadib dalku doorasho aado, si ay shacabka, xisbiyada iyo cid walba u qaadato kaalinteeda”.
“Wixii hadda kadib sii jiitama waxaa ay ka marqaati kici doonaan damac liita iyo mas’uuliyad darro, waxaana ceebteeda qaadan doonta ciddii fasha”.
Shirka maamul-Gobolleedyada, Gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe, ayaa la filyaa in uu dhawaan furmo.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed oo ka wadda-hadlay arrimaha doorashooyinka
Kulanka Golaha Shacabka oo maanta furmay kaddib markii uu baaqday dhowaan